मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ? - Nepalese Times
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ?
नेप्लिज संवाददाता ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १६:४४ (1 महिना अघि) ३१८ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक सकिएको छ । बैठकले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए ।
घर निर्माणका लाथि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल ५० लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम जाने भएका छन्। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको निरीक्षणका लागि उनी सुदूरपश्चिम जाने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिम जाने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उ​नले सुदूरपश्चिममा पुगेको क्षतिका बारेमा जानकारी लिन आफूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको र कुराकानीका क्रममा सुदूरपश्चिम निरीक्षणका लागि जाने इच्छा व्यक्त गरेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री देउवा गृहप्रदेश जाने मिति भने तय भइनसकेको पनि बताए। नेता लेखकले भेटका क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बाढीपहिरो पीडितलाई उद्धार, राहतको व्यवस्था गर्न, मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको उपचार गर्न र किसानका लागि दीर्घकालीन राहतका प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको पनि बताए।
यस्तै सरकारले बाढीपहिरो र डुबानपीडितलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले राहत दिने निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडित भएकाहरूलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। गत शनिबारदेखि परेको पानीले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति भएको छ।